Tababaraha shakhsi ahaaneed: muhiimadda, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka | Ragga Stylish
Waqtiga nolosheena ah waxaan dhamaanteen dooneynay inaan bilowno ku celcelinta nooc isboorti. Hadday tahay shaqsi ama koox isboorti ama inay shaqeyso jirkeena. Waxaa jira yoolal tababareed oo fara badan oo u qaybsan ujeedooyinka qurxinta iyo yoolalka waxqabadka. Si loo galo ama wax looga barto edbinta cayaaraha, waxa ugu fiican ayaa ah in la yeesho a tababar shakhsiyeed. Tababaraha shaqsiga ahi waa qofka kugu hagta dhammaan dhinacyada isboortiga si dadaalkoodu ugu jiheysto dariiqa saxda ah.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa muhiimada ay leedahay shaxda tababaraha shaqsiyadeed iyo faa iidooyinka laga helo shaqaalaynteeda.
1 Waa maxay tababaraha shaqsiyeed
3 Faa'iidooyinka tababaraha shaqsiyeed
Waa maxay tababaraha shaqsiyeed
Tababar shakhsiyeed Waxaa loo tixgeliyey mid ka mid ah 10ka adeeg ee ugu wanaagsan jimicsiga iyo isboortiga. Waana in guushiisu ku jirto faa iidooyinka waaweyn ee lagu helo ku qanacsanaanta gaadhista natiijooyinkii loogu talagalay. Markaad ku biirto jimicsiga, waxaa jira su'aalo badan oo soo baxa: noocee jimicsi ah ayaa iigu fiican aniga, sidee baan u lumiyaa baruurta, sideen ku kasbadaa murqaha, sidee baan u wanaajiyaa iska caabbinta, iwm. Tababaraha gaarka ah waxaad ku baran kartaa sida aad ugu guuleysan laheyd yoolalkaaga sida ugu macquulsan uguna macquulsan.
Taasina waxay ku saabsan tahay ujeedo gaar ahaaneed oo loo fidiyo macmiil kasta waana adeeg wax ku biirinaysa hagaajinta maaraynta xarumaha iyo natiijooyinka dhaqaale qaab la yaab leh. Ujeedada ugu weyn ee tababaraha shaqsi ahaaneed waa inuu kugu hago adiga inaad diyaariso dhammaan tignoolajiyada, ilaha iyo waqtiga aad awoodid Bixi dammaanadda fulinta ujeeddooyinkaaga. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad hagaajiso xawaarahaaga dabaasha, tababarahaaga shaqsiyeed wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo suurtagal ah si uu u fududeeyo wadada oo kugu hago inaad ku gaarto hadafkaas.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka laga helo shaqaaleynta tababaraha shaqsiyeed waa in natiijooyinka lagu gaaro waqti aad u yar iyo habka ugu wax ku oolka badan uguna nabdoon. Si kale haddii loo dhigo, tababaraha shakhsi ahaaneed waa inuu had iyo jeer raadiyaa waxtarka ugu badan ee dhammaan howlaha iyo waxtarka ugu badan ee natiijooyinka. Dhamaanteed yaraynta khataraha ugu badan ee xagga amniga ah. Waa tababaraha shakhsi ahaaneed ee ku siiya talo jireed oo loo qaabeeyey loona diyaariyey inuu kugula qabsado. Thanks to la qabsiga this, hagaajinta xaaladda jireed ee qofka ayaa la gaadhay, iyo sidoo kale awoodahooda iyo xaaladooda caafimaad.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in la muujiyo inay faa'iido u tahay shaqaalaynta shaqsiyan waa hufnaan. Waxaa jira daraasado badan oo muujiyay in tababaraha shaqsiyeed uu bixiyo waxtarka ugu weyn ee ficil-celinta isboortiga marka loo barbar dhigo tababarka bilaashka ah. Daraasaduhu waxay iftiiminayaan inay ka sareyso dumarka oo dhan ee gaaro himiladooda maaddaama ragga ay u badan tahay inay isku dayaan inay tababaraan kaligood. Furaha waxtarkani waa taas qorshaha tababarka waxaa lagu waafajinayaa xaaladaha iyo ujeedooyinka qof walba.
Intaas waxaa sii dheer, tababarka xirfadeed iyo isboorti wuxuu badbaadiyaa waqti badan oo lagu qaato jimicsiyo aan waxtar lahayn ama si qaldan loo qorsheeyay loona tababbaray. Markaad shaqaaleysid xirfadle, waxay sameyn doonaan baaritaan jireed waxayna qaadi doonaan xog si loo habeeyo barnaamijka tababarka. Sidoo kale waxay ku saleysan tahay waqtiga aad heysato iyo yoolalka aad rabto inaad gaarto. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad dufan lumiso, tababaraha shakhsi ahaaneed wuxuu diyaariyaa jimicsi jimicsi adiga kugu habboon si aad u gaarto hadafkan. Ujeeddooyinka ugu fiirsashada badan ee shaqaaleynta tababaraha shaqsiyeed waa: miisaanka oo yaraada, murqaha oo kordha, qeexidda, dayactirka, hagaajinta waxqabadka, xoojinta xoogga, iwm. Waxay kuxirantahay ujeedada qof walba, qorshaha tababarka ayaa ku kaladuwan iyo waliba hadba sida ay u socoto.
Faa'iidooyinka tababaraha shaqsiyeed
Inta badan dadka ku guuldareysta inay ku biiraan jimicsiga waxaa u sabab ah awood darri la'aan. Dadkani waxay raadinayaan fure sixir ah si ay ugu gaaraan himilooyinkooda muddo gaaban. Furaha ayaa ah in la buuxiyo aasaaska tababarka iyo nafaqada iyo joogtaynta. Dhibaatadani waa mid ka mid ah kuwa sida weyn u saameeya dhammaan bilowga. Sababtaas awgeed, dadkaani waa kuwa loogu talo galay lataliyaha shaqsi ahaaneed. Faa'iidooyinka aan ka helno shaqaalaysiintooda waxaa ka mid ah kororka dhiirigelinta uu xirfadyahankani ku beerayo macmiilkooda.
Sameynta barnaamij tababar, tababaraha shaqsiyeed wuxuu kugu dhiiri gelinayaa inaad awood u yeelan karto inaad si joogto ah oo joogto ah u waddo. Sidoo kale, markii aad shaqaaleeysid tababare shakhsi ah, isaga ama iyadu waxay hubin doonaan inay kuu helaan natiijooyinka ugu fiican ee suurtogalka ah adiga. Tani waxay u tarjumaysaa hoos u dhac ku yimaada waqtiga maal gashiga tababarka. Tababare kasta oo shakhsi ahaaneed oo wanaagsan wuxuu ku dadaalayaa inuu hagaajiyo farsamadaada jimicsiga. Sidoo kale waa inaad ku hagtaa naftaada tababarahan adiga oo raadinaya inaad barato iyo in, muddada fog, aadan u baahnayn isaga.
Tirada tababaraha shaqsiyadeed sidoo kale waxay leedahay xoogaa faa'iido darro ah. Midka ugu weyni waa qiimaha. Waana in shaqaalaynta xirfadyahankani ay u baahan tahay adeeg dheeri ah qiimaha aad ka bixiso jimicsiga. Waxaa jira dad badan oo aan awoodin qiimaha tababaraha shaqsiyeed oo aakhirka joojiya. Faa’iido darrada kale ayaa ah helitaanka xirfadle aan lahayn shahaadooyinka lagama maarmaanka ah. Ahaanshaha xirfad aan nidaamsanayn, waxaa jira tababarayaal shaqsiyadeed oo leh tabobar dhexdhexaad ah. Sababtaas awgeed, kuwa xiiseynaya shaqaalaynta waxaa lagula talinayaa inay weydiiyaan tababbarkooda iyo khibradooda. Sidan ayaad ku haysataa dammaanad ah inaad runtii shaqaaleysiin doonto xirfadle.
Hal dhinac oo ah in la tixgeliyo oo aad muhiim u ah ayaa ah in tababaraha shakhsi ahaaneed uu sidoo kale awood u leeyahay inuu kaa dhigo cunto waafaqsan ujeeddadaada. Haddii tababaruhu awood u leeyahay oo keliya inuu kugula taliyo tababarka, wuxuu qabanayaa shaqadiisa nuska. Taasi waa, haddii aad raadineyso kor u kaca muruqyada ama luminta dufanka, Iyadoo aan lagu lifaaqin cuntada sida waafaqsan ujeeddadaada, ma awoodi doontid inaad natiijooyin hesho.
Haddii aad rabto inaad ka ogaato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tababarka shakhsi ahaaneed iyo qorshooyinka nafaqada ee khadka tooska ah, iigu soo qor fariin gaar ah instagram: @abdihakin_abdi ama emayl u dir german-entrena@hotmail.com. Waan xallin doonaa dhammaan shakigaaga adigoon ballanqaad lahayn. Anigu waxaan ahay tababare shakhsi ahaaneed iyo nafaqeeye isboorti oo hadda bilaabaya warbaahinta bulshada, laakiin waxaan khibrad u leeyahay in kabadan 2 sano macaamiisha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto tababaraha shaqsiga ah iyo muhiimadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Tababar shakhsiyeed